China kwakakanda simbi zvikamu vagadziri uye vanotengesa | Bocheng Co-chisikwa
Fekitori yedu inozivikanwa mundima iyi kweanopfuura makore gumi. Tinogona kupa akasiyana marudzi eDuctile Iron Kukanda zvikamu uye Gray Iron Kukanda zvikamu
Kazhinji inogadzira negrey iron HT200, HT250, ductile iron 65-45-12, 60-40-18, 80-55-06, 80-60-03, nezvimwe.
Gray / Gray Kukanda Iron
Grey simbi, kana grey cast iron, imhando yesimbi yakakandwa ine graphitic microstructure. Inotumidzwa zita reruvara rwegrey rwekutsemuka kwainogadzira, izvo zvinokonzerwa nekuvapo kwe graphite.
Ndiyo yakajairwa simbi uye inonyanya kushandiswa zvinhu zvekukanda zvichienderana nehuremu.
Iyo inoshandiswa kune dzimba umo kuomarara kwechinhu kwakakosha kupfuura simba rayo rakasimba, senge yemukati injini injini humburumbira, pombi dzimba, vharafu miviri, mabhokisi emagetsi, uye ekushongedza castings. Gray kukandira simbi yakakwira yekupisa conductivity uye yakatarwa kupisa kugona inowanzo shandiswa kuita cast cast iron cookware uye disc brake rotors.
Iyo ductile simbi yekukanda zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya kune Auto-mota, zvitima, marori, mota zvikamu, zvemigodhi michina zvikamu, zvekurima michina zvikamu, machira emachina zvikamu, kuvaka michini zvikamu, mavhavha uye pombi zvikamu, nezvimwe.
Tinogona cutomize simbi inivhesitimendi vachikanda zvikamu sezvinoenderana pakudhirowa kwako uye techinical zvinodiwa.
Tinogona kuita cnc machine mushure inivhesitimendi Kudzingwa sezvo muzana yenyu zvinodiwa. Zvakare ita kurapwa kwepasirese kwakadai sekupfura nenyunje, kupenda, kupenda zinc, kupora ...
Kunze kwezvo, mainjiniya edu ehunyanzvi anogona kupa zvinonzwisisika kuneako kudhirowa uye nzira yekugadzira ..
Nekuda kweyakagadzikana mhando uye nemutengo unonzwisisika, zvigadzirwa zvedu zvekukanda zvakatumirwa kuNorth America, Western Europe, Austria, South America neIndia.
Munguva yekutanga kubatanidzwa kweiyo mutengi dhizaini maitiro isu tiri kupa yehunyanzvi yekuisa kune edu vatengi maererano nemaitiro ekugona, kudzikisira mutengo uye mashandiro maitiro. Unogamuchirwa kuti utaure nesu kwehunyanzvi kubvunza uye bhizinesi pamwe
Pashure: T yakatsemurwa simbi pamusoro peplate
Zvadaro: matombo ekuyera egranite